Talo-bixin – dugsiga/xannaanada - Adeegyada qoysaska - pmto.no
Halkan ayaad joogtaa: Bogga hore / Adeegyada qoysaska / Talo-bixin – dugsiga/xannaanada
Talo-bixinta waxa la siiyaa shaqaalaha xannaanada carruurta iyo dugsiga ee ka shaqeeya carruurta jirta jirta 3 ilaa 12 sanno jir, ee halis ugu jira in ay qaadaan, ama qaba, dhibbaatooyinka la xiriira habdhaqanka.
Yaa bixiya talo-bixinta?
La-taliyeyaasha adeegyada ka talinta cilimi-nafsiyeedka waxbarashada, shaqaalaha hay’adda ka shaqeeya waxbarashada gaarka ah, khabiirada, khabiirada waxbarashada gaarka ah ee dugsiyada, macalimiinta ama la-taliyeyaasha la baray waxqabadkan.
Waa maxay ujeedada Talo-bixintu?
Ujeedada la-talintu waa in xannaanooyinka carruurta iyo SFO/shaqaalaha dugsiga tilmaamo laga siiyo adeegsiga farsamooyinka iyo xeeladaha ka hortagi kara ama dhimmi kara dhibbaatooyinka habdhaqan ee ka jira kooxaha/fasalada. Waa in la dhimo habdhaqanka mucaaradnimada ah, horumarka wacana waa in la dhiirigeliyo.
La-taliye ayaa shaqaalaha dugsiga/xannaanada caruurta siiya tilmaan-bixin usbuuc kasta ah ayaa
• 6-8 talo-bixin
• Waxa la bixiyaa tilmaamo la xiriira hal ilmo, iyo carruurta kooxda/fasalka oo dhan, marba sidii loo baahdo.
• Shaqaalaha dugsiga/xannaanada carruurta waxa la baraya sidii ay qaab wacan ula dhaqmi lahaayeen ilmaha/carruurta.
• Farsamadu waxa ay ka kooban tahay in si firfircoon loo barto qaabab kala duwan oo loo qaabilo loolana macaamilo ilmaha/carruurta.